Banyere Anyị - Qingliu Craftwork Co., Ltd.
Ekwentị: + 86-0539-8372931 (Marketing Department)
Ite & Planters
Nchekwa & Organizaion
Festival ihe ndozi
Linshu Yimeng Qingliu Craftwork Co., Ltd locates na Linyi obodo, ebe bụ ma ama n'ihi ịbụ hometwon ọcha wicker. Dị ka a nnukwu-scaled rụpụta, anyị nwere ike na-enye iche iche iche iche nke willow ihe siri imewe na ikenyeneke mbiet àgwà.
Guzosie Ike na 2001. a afọ iri afọ ahụla ngwa mmepe nke anyị factory. Bi 20000 square mita ala, anyị jiri banyere 500 ọrụ dị ka anyị mbụ mmebe, ha nile na-spealized na interweaving maka a ogologo akụkọ ihe mere eme, ọrụ ha nwetara nnukwu ugwu si ma n'ụlọ na mba ọzọ.
Dị ka a ọkachamara ekspootu, anyị na-ezuru ahụmahụ exporting willow handicrafts, ruo taa, anyị wuru azụmahịa mmekọrịta ọtụtụ mba n'ụwa dum, karịsịa na Europe, North American na na, ma merie magburu onwe n'aka si ahịa anyị.
Quality na ahịa ọrụ bụ anyị edumbet.
Production ga-ndokwa dị na gị foto, nkọwa ma ọ bụ gị sample. Ozugbo ị na-enye anyị a mpempe imewe akwụkwọ, a mara mma craft Eluigwe anyị ala anyị nwere ike iru gị.
Ọ bụla oge gị ase ga-ekele.
RIGHT AT HOME: Holiday ndozi awade ụtọ ...